आज धेरै मानिसहरू हरेक दिन विभिन्न देशहरूमा छन्। यो व्यवसाय यात्राहरु, वा साधारण यात्रा र केही नयाँ र असामान्य हेर्न इच्छा, छ, काम को कारण हुन्छ। तर मातृभूमि मा हामी सबै र साँच्चै बाँकी बारेमा जानकारी वा प्रभावहरू साझेदारी गर्न चाहने घनिष्ठ मित्र बाँकी छन्। यसो गर्न, तपाईं मास्को गर्न कल गर्न कम्तिमा कसरी जान्नु आवश्यक - रूस को राजधानी। यो प्रक्रिया प्रसिद्ध शहर को उदाहरण द्वारा, यो सबै भन्दा आबादी छ देखि नातेदार र पर्यटकहरु त्यहाँ सबैभन्दा विचार र तदनुसार।
कहिलेकाहीं एक फोन कल मानिसको भाग्य निर्णय गर्छ। कसैले तपाईंलाई तुरून्त, रूस मा छ जो विदेश बाट सदस्य, एक कल गर्न आवश्यक जब यो अवस्थामा हुन चाहन्थे, तर तपाईं यसलाई अझ राम्रो बनाउन कसरी थाहा छैन।
एक ल्याण्डलाइन वा मोबाइल फोनबाट मास्को गर्न कल गर्न भन्दा सजिलो हुन के देखिन्थ्यो। शायद, यो उद्देश्य केवल नम्बर डायल गर्नुपर्छ, माथि फोन छान्न र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तर त्यहाँ थियो।
का, एकै समयमा हेरौं मास्को गर्न एक कल रूपमा।
सबै को पहिलो, तपाईंले एक टेलिफोन नम्बर, जो आफ्नो डिप्लोयमेन्ट निर्भर डायल केही नियमहरू जान्नु आवश्यक छ। तपाईं रूस मा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले नियमित फोन कल योजना प्रयोग गर्न आवश्यक: तपाईं देश कोड डायल, त्यसपछि त्यहाँ एक जडान छ, जो पछि, बीप र अन्त डायल फोन नम्बर पछि क्षेत्र कोड थप्न। त्यहाँ जटिल केही छ। तपाईं विदेश हुँदा तर स्थिति एकदम मामला मा फरक छ। बाट मास्को कल कसरी जानकारीको लागि एक ल्याण्डलाइन फोन, प्रत्येक देशमा कुनै पनि सूचना डेस्क मा जान्न सक्षम हुनेछ। तर समय बर्बाद गर्न क्रममा, तपाईं मात्र एक निश्चित कोड सम्झना गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले, एक ल्याण्डलाइन फोनबाट मास्को कल कसरी?
8-ध्वनिक gudok- (499/498/497/496/495) - YYY- YY -YY
495/496/498/499 तथ्याङ्कले - मास्को को कोड छन्। प्रयोग सबै गर्नुपर्छ, तर केवल तिनीहरूलाई को एक।
YYY- YY- YY - मोबाइल वा ल्यान्डलाइन नम्बर फोन नम्बर कल गर्न चाहनुहुन्छ
शहर कोड तपाईँले प्रयोग गर्न चाहनुभएको को जो, तपाईंले आफ्नो अपरेटर वा सदस्य, जो कल संग जाँच गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले हामी ल्याण्डलाइन फोनबाट मास्को कल कसरी बाहिर समझ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मात्र एउटा सानो तपाईं फोन कल संग कठिनाइ हुनेछ जो प्रयोग गरेर, संख्या को संयोजन सम्झना गर्न आवश्यक छ।
अब मास्को मोबाइल कल गर्न कसरी हेर्न दिनुहोस्। यस्तो घन्टी को योजना एक निश्चित फोनबाट कल प्रवाह माथिको कम बाट अलिकति अलग छ। पूर्ण दयनीय परिवर्तन - वा बरु, तिनीहरू केवल एक नम्बर सम्बन्धित।
अब, सम्झना, एक मोबाइल फोन बाट मास्को गर्न एक कल रूपमा:
7 - रूस को ग्राहकहरु कलको लागि प्रयोग गरिन्छ रूसी संघ, अन्तरराष्ट्रिय कोड छ
(495/496/498/499) - मास्को शहर कोड
YYY- YY- YY - मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन नम्बर
रूस कल को लागत के हो?
सबै को पहिले आफ्नो बिलिङ कथन मा निर्भर गर्दछ। आज, धेरै कम्पनीहरु विदेश बाट रूस कल लागि आकर्षक महसुल योजना प्रस्ताव। तपाईंलाई एउटा विशेष महसुल चयन जब तपाईं यो देश कल लगभग निःशुल्क बनाउन सक्छ - प्रति मिनेट केही मुद्रा को लागि। तर रूस सदस्यहरू सस्तो संचार को यो तरिका मात्र मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता लागि सान्दर्भिक छ। तर सस्तो कल कसरी घर एक ल्याण्डलाइन फोनबाट?
तपाईं एकदम कल लागि तिर्ने लागत कम विशेष कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पहिले संख्या एक निश्चित सेटको नम्बर डायल गर्नुहोस् र अर्को महसुल लागि कल। यी कोड तपाईं पनि मोबाइल अपरेटरहरु सिक्न सक्छौं।
आजको लेखमा, तपाईं एउटा सानो मूल्य लागि मोबाइल र ल्यान्डलाइन फोन बाट मास्को कल गर्ने बारे सिके। शुभकामना छ!
अमेरिका मा कल गर्न कसरी - गाह्रो छैन
को महसुल योजना "मेगाफन वीआईपी: सबै-समावेशी": विवरण
घर wifi सञ्जाल
म कसरी थाह के मेरो ISP: सबै तरिका
अज्ञात कल - एक लुकेका कोठा कसरी पाउन?
होटल "भिक्टोरिया", ओडेसा। समीक्षा, मूल्यहरू। ओडेसा मा आराम
Aviakopmaniya "Dobrolet": उडानहरू, हवाईजहाज र टिकट मा यात्री समीक्षा। को क्रिमीआ "DOBROLET" मा उडानहरू को समीक्षा